Hitsin-dàlana fanoratana kopia 501 nataon'i Amy Harrison | Martech Zone
Hitsin-dàlana fanoratana kopia 501 nataon'i Amy Harrison
Alahady 17 Febroary 2013 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Douglas Karr
Amy Harrison, mpanoratra an-tsoratra ho an'ny mpandraharaha sy mpanazatra, dia nasongadina tao amin'ny bilaogin'ny mpanoratra an-tsoratra tsara indrindra amin'ny Internet. Amy dia namoaka ebook iray $ 17 izay manondro ny sasany amin'ireo andianteny tiany indrindra ary koa teny sy andian-teny sasany hitany fa be mpampiasa bilaogy sy mpanoratra mpanoratra.
Ny torolàlana hitsin-dàlana Copywriting dia misy:
30 Fomba mankany amin'ny lohateny mpamono olona - Eto ianao dia mahazo maodely 30 (sy soso-kevitra momba ireo teny ilainao hampiasaina hamenoana ny banga) mba hahafahanao mamorona lohateny ho an'ny orinasanao na bilaoginao izay milaza amin'ny mpanjifanao ny zavatra ataonao (ary ny antony tokony hamakiany hatrany ) segondra.
104 Andian-teny hitazomana azy hiresaka - Fantatrao ve ny fahaizan'ny mpanoratra sasany mitazona an'io resaka mifampiresaka io mba hahatsapanao fa mifandray amin'ny olona iray ianao fa tsy mamaky ny torolàlana amin'ny DVD-nao? Ireto misy teny sy andian-teny ifampiresahana hanampy anao hanao toy izany koa.
54 Fomba entina manapaka ny fluff - Rehefa reraka izahay dia manomboka miresaka “zavatra” sy “zavatra” ary ny teny rehetra hoe “tsy tena milaza zavatra manokana amiko ianao” izay mety hahatonga ny asa soratanao ho hadino toa ilay toerana navelanao ny lakilen'ny fiaranao… Ity fizarana ity mampiseho aminao ny fomba hialana amin'izany.
Andianteny 75 ampidirina POW! - Ny fiezahana hihazona io angovo peppy io aorian'ny drafitra faha-3 anao dia sarotra, ary mora ny miditra amin'ny fiteny “tsara, tena lehibe, tena lehibe” izay manaitra toy ny atin'ny boaty salady ao anaty vata fampangatsiahana ahy. Ampiasao ireo teny ireo rehefa te-ho toa anao manana ny angovo mahafatifaty alika kely ianao. (Fampitandremana - Teny MAFY ireto, mila famafazana hazavana fotsiny ianao hamelona ny kopia na ny bilaoginao!)
87 Fomba handokoana ny fanaintainan'ny mpanjifanao - Arakaraka ny ilazanao ireo olana na olana atrehin'ny mpanjifanao no hahalalan'izy ireo kokoa ny zavatra lazainao fa azonao atao momba izany. Asehoy azy ireo mazava tsara fa azonao tsara ny zavatra iainan'izy ireo.
Andian-teny 80 hanehoana azy ireo ny zavatra ho tsapan'izy ireo - Rehefa avy nandoko ny sarin'ny fanaintainany ianao dia afaka namariparitra ny zavatra mahatalanjona tsapan'izy ireo rehefa avy nisoratra anarana tamin'ny bilaoginao izy ireo, nividy ny vokatrao na nanakarama anao marina? Mandrosoa ao amin'ity fizarana ity rehefa mila manazava ny valiny mahatalanjona rehetra antenain'izy ireo amin'ny fiarahana aminao ianao.
71 Fomba hanakatonana ny fifanarahana - Tsy maninona raha tianao ny hamaky foana ny mpihaino anao, na hisoratra anarana amin'ny mailakao, na hiditra ao amin'ny kliobanao mpikambana na hividy ny eBook anao dia tokony hampahafantarinao azy ireo izay tokony hatao sy ny antony tokony hataon'izy ireo. izany. Ireo fehezanteny ireo dia mampiseho aminao fa misy fomba mihoatra ny 1 hahatonga ny mpanjifanao handray andraikitra.
Andian-teny ” - tafiditra dia faritra iray ahafahanao mirakitra ny fehezanteny manokana anao, na andian-teny hafa izay mety ho manokana amin'ny tsenanao kendrena, ny faritra ary ny "all-isme" kely misy anao. Ho gaga ianao fa afaka hanjavona mora foana amin'ireo asa soratanao ireo raha tsy fantatrao ny fampidirana azy ireo.
Ampiasao ny rohy miaraka aminay ary makà kopia an'ity boky tsy mampino ity ankehitriny!
Hitsin-tsoratra 501 fanoratana
Tags: dika mitovyfanoratana kopiapejy fandraisanakopia mandresy lahatrafifandraisana amin'ny varotra
Best. Valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety. Mandrakizay.
Ny fantsom-barotra miova?